एन्ड्रोइड रुट के हो, कसरी गर्ने? - dsnews
एन्ड्रोइड रुट भनेको एन्ड्रोइड स्मार्ट फोनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउनु हो कि, जहाँबाट तपाईंले आफ्नो मोबाइलमा सामान्य अवस्थामा गर्न नमिल्ने कामहरु गर्न मिलोस्। प्राविधिक भाषामा भन्ने हो भने मोबाइलको ‘सुपर युजर’ (एडमिनिस्ट्रेटर) बनाउनु हो। यसरी हामीले मोबाइल बनाउने उत्पादक कम्पनीले गर्न नदिने काम पनी गर्न सक्छौं।
तपाईंले सामान्यतया मोबाइलबाट हटाउन नमिल्ने एप्सहरु आवश्यक नलागेमा हटाउन सकिन्छ।
तपाई‌ले एन्ड्रोइड फोनको सफ्टवेयर (रोम) लाई आफ्नो अनुकूल ढाल्न सक्नु हुन्छ। अर्थात् एन्ड्रोइड फोन बनाउँदा एन्ड्रोइडको सफ्टवेयरमा लेखिएको कोडलाई परिवर्तन गरेर मोबाइलाई आफूले चाहे बमोजिम देखिने तथा काम गर्ने गराउन सक्नु हुन्छ। जस्तैः नोटिफिकेसनको कलर परिवर्तन गर्न, भाइब्रेसनको गति घटबढ गर्न, स्क्रिनको रङको मिश्रण परिवर्तन गर्न, वाइफाइको पासवर्ड थाहा पाउन, एन्ड्रोइडको भर्जन परिवर्तन गर्न साथै धेरै फिचर थप गर्न सकिन्छ।
Previous यसरी ब्लक गर्नुहोस् अनावश्यक इमेल
Next चीनको अर्को चमत्कार ! कृत्रिम चन्द्रमा पछि सुर्य निर्माण थाल्यो [तस्विर हेर्नुहोस्]